USA: Trump oo xilkii ka qaaday Xoghayihii Dibadda Rex Tillerson – Kasmo Newspaper
USA: Trump oo xilkii ka qaaday Xoghayihii Dibadda Rex Tillerson
Updated - March 13, 2018 2:03 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa maanta shaqadii ka eryay Wasiirkiisii Arrimaha Dibadda, Rex Tillerson, ka dib xurguf soo jitamaysay 14 bilood oo uu xilkaas hayey una badneyd kala aragti duwanaan arrimaha Suuriya, Iraan iyo Kuuriyada Woqooyi.
Wargayska Washington Post ayaa xusaya in Madaxweynuhu, Jimcihii ka codsaday Tillerson in uu iska tago, taas oo Xoghayaha Dibadda ku khasabtay in uu soo gaabiyo safarkiisii Afrika.
Jagadii Tillerson waxaa qabanaya Mike Pompeo, Agaasimihii Sirdoonka Dibadda CIA oo markiisa lagu beddelay Gina Hapsel oo noqonaysa haweeneydii u horreysay taariikhda Maraykanka oo hay’addaas madax ka noqota.
Trump ayaa Pompeo ku tilmaamay shakhsiga ugu habboon xilligaan ciriiriga ah ee dibolomaasiyadda Maraykanka, si boorka looga jafo kaalintii Maraykanku ku lahaa arrimaha caalamka iyo xiriirka bahwadaagtiisa.
‘Waaya-aragnimadiisa dhanka Ciidammada, Congress-ka iyo hoggaankii CIA waxay si fiican ugu diyaariyeen kaalintaan cusub, sidaa darted waxaan Senate-ka ka codsanayaa oggolaansho degdeg ah’ ayuu yiri Trump.
Ugu dambaystiina wuxuu u mahad celiyay Tillerson hawlihii uu u soo qabtay qaranka, wuxuuna u rajeeyay wanaag fara badan isaga iyo qoyskiisaba.
Dhammaadkii Nofember 2017 Warbaahinta Maraykanka ayaa isla dhex maraysay warar sheegaya in Aqalka Cad qiimaynayo haddii Tillerson lagu beddeli karo Pompeo iyo in kale iyada oo New York Times shaaciyay in qorshaha beddelka Tillerson uu ka dambeeyo Agaasimaha Aqalka Cad, John Kelly, lana dhaqangalin doono horraanta 2018ka.
Qayb ballaaran oo ka mid ah Maamulka Trump ayaa u aragta is beddelka mid muhiim ah, xilli la isu diyaarinayo kulanka hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-Un, isla markaana socdaan wadahadallada dib u habaynta heshiiska ganacsiga NAFTA ee USA-Mexico-Canada iyo arrimo kale.